सांसदको दसैँ भत्ता काटिएपछि रामनारायण बिडारीको आक्रोश : के सबै सांसद विनोद चौधरी हुन् ? – Paluwa Khabar
अषोज २७, २०७८ बुधबार 62
सरकारमाथि सांसद बिडारीको प्रश्न छ, ‘सभामुखका निजी सचिवालयका सबै स्वकीयहरूले तलबसहित दसैँ भत्ता पाउने । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष र उनको सचिवालयले पनि पाउने । तर, सचेतक, प्रमुख सचेतक, सभापति, उनीहरूको सचिवालय र ड्राइभरसमेतले दसैँ खर्च नपाउने किन ?’
उहाँले आफ्नो सचिवालयलाई दिएको गाडी कटौती गर्नुप–यो । उहाँले पनि अन्य देशमा बनेको नभई भारतमा बनेको सस्तो खालको गाडी खोज्नुप–यो । आफू चाहिँ मोज मज्जा गर्ने, बिलासी गाडी प्रयोग गर्ने।
आफ्नो सचिवालयमा बिसौँ मान्छेहरूलाई तलब सुविधा खुवाउने, तर सबै सांसदहरू विनोद चौधरी हुन् ? के सबै सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ हुन् ? सांसदहरू विभिन्न समुदायबाट आएका किसान मजदुर, सर्वहारा पनि छन् । सरकारले गरेको यो कुरा मिलेन ।
यो खबर रातोपाटीमा उल्लेख छ
Prevराजा ज्ञानेन्द्रलाई भट्टराईको धम्की : देशको आलिकती माया भए चुप लागेर गणतन्त्र स्वीकार्नु ( सहि वा गलत )